12 Izilwane Ezihlukile Ozozibona EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 12 Izilwane Ezihlukile Ozozibona EYurophu
(Kugcine ukubuyekezwa On: 28/03/2021)
Okumibalabala, exotic, futhi okungavamile ngezici nendawo yokuhlala, uzothola lezi 12 izilwane izilwane ezihluke kakhulu ukuzibona eYurophu. abahlala ezilwandle ezijulile, Alps aphakeme kakhulu, noma ukuphumula emahlathini aluhlaza aseYurophu, qiniseka ukuthi ubheke lezi zilwane zasendle ezimangazayo ekubalekeni kwakho okulandelayo eYurophu.
1. Izilwane Ezihlukile Ozozibona EYurophu: I-European Lynx
Ukuhlala eSwitzerland, France, Italy, kanye neCzech Republic, I-European Lynx iyi-wildcat eyingqayizivele. ILynx inomsila omfishane, uboya obunsundu obunamabala, kulula kakhulu ukubona ehlathini lasebusika eliqhwa.
Uzothola leli kati lasendle uhlobo oluhehayo lekati elifuywayo, nengulule enamabala asendle.
Ngingayibona Kuphi I-European Lynx EYurophu?
I Ihlathi Bavarian yindawo emangalisayo yokubona amaLynx kanye nenzalo yabo.
2. Izilwane Ezihlukile Ozozibona EYurophu: I-Puffin
Ungazibona kahle lezi zidalwa ezinhle kusukela maphakathi no-Ephreli ngamawa asogwini. Ngokwesibonelo, ISkomer Island eseWestern Wales yindawo enhle yezilwane zasendle nezithombe zePuffin. Ngaphezu kwalokho, ugu lwaseBrittany kungenye indawo emangalisayo yokubabaza inyoni yasolwandle i-Atlantic.
Ama-puffin afinyelela phezulu 30 cm ubude futhi 20 cm ukuphakama. Ngaphezu kwalokho, ngomlomo we-orange kanye nemibuthano emehlweni, uzothola ukuthi kulula kakhulu ukuzibona lezi zinyoni zasolwandle ezithandekayo emaweni ngasolwandle. nge 90% wenani labantu emhlabeni jikelele eYurophu, ungancoma amakoloni wonke emaphethelweni aseYurophu cishe unyaka wonke.
Ngingawabona kuphi ama-Puffin eYurophu?
Ugu lwaseBrittany eFrance naseSkomer Island yizindawo ezinhle lapho ungabona khona iPuffin.
3. Izilwane Ezihlukile Ozozibona EYurophu: I-Saiga
ISaiga iyinyamazane eyingqayizivele, ngeshwa, ezisengozini kulezi zinsuku. ISaiga ingenye ye- 12 izilwane eziyingqayizivele kunazo zonke ongazibona eYurophu. Ngamakhala ayo angajwayelekile, lesi silwane esiyingqayizivele singakwazi ukuzivumelanisa kalula nezimo ezibandayo nezishisayo, ngoba ifomu lekhala lenza le njongo.
Ngakho-ke, iSaiga ayinakhaya elihleliwe futhi ingathutheleka iye phezulu 1000 km phakathi kwehlobo nobusika. Ngaphezu kwalokho, ikwazi ukuhamba ngamakhilomitha amaningi ngosuku futhi isebenza kakhulu emini. Iqiniso elithandekayo ngeSaiga ukuthi ngaphezu kwezitshalo notshani, idla ezinye izitshalo ezinobuthi.
Ngingayibona Kuphi ISaiga EYurophu?
Ungabona iSaiga ezintabeni ezinhle zaseCarpathia nasezihlathini.
4. Izilwane Ezihlukile Ozozibona EYurophu: IPine Marten
Uma kwenzeka uhamba izintaba emahlathini aseYurophu nasezihlathini kungenzeka uhlangane nePine Marten eyingqayizivele. I-Pine Martens ihlala emigodini yezihlahla futhi ingabantu abagibelayo abagibelayo, ngakho-ke qiniseka ukuthi ubheka phezulu uma ufuna ukubona lesi sidalwa esikhethekile.
Ama-Pine Martens anombala onsundu ngokubomvu, nebhibhi eliphuzi elikhanyayo entanyeni. Ngakho-ke nasemahlathini, kuzoba nzima ukuphuthelwa yilesi silwane esikhangayo egatsheni lesihlahla, ngaleyo bhibhi eliphuzi.
Ngingayibona kuphi iPine Martens?
Izinkangala eScotland nase-Ireland, yizindawo ezinhle kakhulu zokubona iPine Marten.
5. Izilwane Ezihlukile Ozozibona EYurophu: I-European Green Lizard
Ngezinye 40 cm ngosayizi, Kuzoba nzima ngempela ukuphuthelwa yisigcilikisha esiluhlaza saseYurophu. Lesi sibankwa esihlukile sinomhlane ogqamile oluhlaza ogqamile nesisu esiphuzi. Ngokuthakazelisayo, ngesikhathi sokukhwelana, abesilisa bashintsha umbala baba luhlaza okwesibhakabhaka ngokugqamile.
I-Green Lizard ihlala endaweni ephakeme kakhulu ye- 2000 amamitha, ngakho, ngenkathi ukhuphuka ezintabeni zase-Austrian, qiniseka ukuthi uyaqalaza. Uma usuka ekwindla uye ebusika, lapho-ke uzozibona lezi zibankwa emihumeni nasezindaweni zokucasha ezomile. Nokho, ehlobo, kusukela ngoMashi, lobu buhle buzobe busifudumeza ilanga.
Ngingayibona Ngaphi I-Green Lizard?
Ungabona lesi sibankwa esiluhlaza sihleli elangeni emadwaleni, kulo lonke elaseYurophu, Austria, Germany, kuze kufike eRomania naseTurkey.
6. Izilwane Ezihlukile Ozozibona EYurophu: I-Pink Flamingo
Ama-flamingo amahle apinki ahlala kwelinye lama- izindawo ezigcina izilwane zasendle ezihamba phambili e-Europe. Ama-flamingo abomvana ahlala namahhashi asendle amangalisayo esiqiwini saseCamargue eFrance. I-pink flamingo isiphenduke uphawu lweCamargue, ngemibala yayo ephinki epinki.
Emachibini, imarshland, noma endiza phezulu, bebonisa ubuhle babo, i-pink flamingo ngumbono omuhle impela. Njengoba udabula i- 4 imizila eCamargue, uzoqonda ngokushesha ukuthi kungani le nyoni ingenye ye- 12 izilwane eziyingqayizivele kakhulu ukuzibona eYurophu.
Ngingayibona Ngaphi I-Pink Flamingo Esiqiwini SaseCamargue?
ICamargue iyindawo enkulu yemvelo eFrance. Ukuze ubone le nyoni eyingqayizivele, ikhanda ku Ipaki ye-Ornithological.
7. Imikhomo e-Ireland
Uma kungenzeka ukuthi uhamba ngomkhumbi eNingizimu ye-Ireland, ndawana thize ebangeni, ikhanda elihluzekile lingase livele ngaphansi kwamanzi. Lokhu kungaba umkhomo we-Humpback, umkhomo omkhulu futhi omkhulu ohlala olwandle oluzungeze i-Ireland.
Ngaphandle kobukhulu bawo obumangazayo nobesabekayo, 12-16 amamitha, ayinabungozi futhi imnene. Le mikhomo emihle ifika ekwindla sekwedlule isikhathi, becula izingoma zabo eziyinkimbinkimbi, ihlala phakathi 10-20 amaminithi.
Ngingawubonaphi Umkhomo We-Humpback?
Scotland, Ireland, I-England ilungele ukubuka imikhomo.
8. Izilwane Ezihlukile Ozozibona EYurophu: Izimpisi
Kuyathakazelisa futhi kuyesabisa, izimpisi zingesinye sezilwane ezisengcupheni yokushabalala eYurophu. Lezi zilwane eziyingqayizivele zivumelana kalula nanoma iyiphi indawo yokuhlala, ngemibala yabo yokufihla, futhi inkulu ngosayizi. Kunezinhlobo eziningi zempisi, kepha impisi emaphakathi ingafinyelela phezulu 70 kg.
Izimpisi zihlala emahlathini, emaphaketheni, futhi kubhekwe njengezilwane ezivikeleke kakhulu eYurophu. Kunezikhungo zokonga kanye nezinqolobane zokuvikela izimpisi futhi zihlinzeke ngezimo ezihamba phambili ukuze zingashabalali ngokuphelele.
Ngingazibona Ngaphi Izimpisi EYurophu?
Isifunda saseLiguria e-Italy, ihlathi laseBavaria, nePoland yizimpisi’ indawo yokuhlala ekhethwayo.
9. Izilwane Ezihlukile Ozozibona EYurophu: Amahlengethwa
Iqhakaza futhi icula emanzini asogwini lwase-Italy, amahlengethwa athandekayo angumbono omuhle. Ngenkathi wonke umuntu eke wabona amahlengethwa ezithombeni, amapaki amanzi, noma ama-zoo eYurophu, akukho okuqhathanisa ukuhamba ngomkhumbi nokubabaza lezi zidalwa ezithandekayo.
Isikhathi esihle sokubona amahlengethwa kusehlobo lapho kufudumele, futhi ungahamba ohambweni lokubuka isikebhe samahlengethwa.
Ngingawabona Kuphi Amahlengethwa E-Italy?
I ugu oluhle lweCinque Terre nolwandle lwaseLigurian luyindawo efanelekile yokubona amahlengethwa asendle e-Italy.
Lapho iningi labantu lizwa “ushaka” ukusabela okungokwemvelo kakhulu kuyancipha nokwesaba. Nokho, i-Basking Shark enamandla ingaba nkulu futhi isabise ngosayizi, kepha lo shaka udla iplankton kuphela.
Ngakho-ke, ungazizwa uvikeleke ngokuphelele uma uzungeze lezi 12 amathoni kanye 12 amamitha izinhlanzi. IBasking Shark ngushaka wesibili ngobukhulu e-UK, futhi okubonwa kahle kakhulu emaweni ngesikhathi sasehlobo. Ngakho, uma ubona umphetho omkhulu ongunxantathu nomzimba ompunga, bese uzulisa futhi ulungiselela ikhamera yakho i-Basking Shark snap.
Ngingayibona Kuphi iBasking Sharks Inn I-UK?
ngasogwini lwaseCornwell, i-Isle of Men, nezindawo eziningi ezisentshonalanga yeNgilandi, ungabona oshaka be-basking endaweni yabo yemvelo.
11. Izilwane Ezihlukile Ozozibona EYurophu: I-Wolverine
I-Mess, I-Mess, igama lesidlaliso le-wolverine ngesiLatini, ihunyushelwe ku-Gluten. Leli gama elingajwayelekile lifanelana nelungu elikhulu kunawo wonke emndenini waseMustelidae – ngokuphelele ngoba banesifiso esikhulu esingavamile.
Ngokwalesi sizathu, ama-wolverines angahamba ibanga elide eyofuna ukudla, futhi manje ingatholakala kulo lonke elaseYurophu.
Ngingayibona Ngaphi iWolverines?
ngokuvamile, inani le-wolverine ligxile eRussia, iTaiga, nase-Asia. Ngaphezu kwalokho, ungabona futhi ama-wolverines ku- ipaki yezilwane zasendle e-UK.
12. Izilwane Ezihlukile Ozozibona EYurophu: I-Alpine Ibex
Phezulu phezulu e- 4000 amamitha, phakathi kweziqongo zezintaba ezineqhwa, emaweni anamadwala, uzothola i-Alpine Ibex. Ngezimpondo ezingakhula ziye ku 140 cm, le mbuzi yasezintabeni ingenye yezilwane ezihlaba umxhwele futhi ezihlukile eYurophu.
Okokuqala, abahlala e-Alps yaseYurophu, i-Alpine Ibex, akulula kangako ukukubona uma uqhathanisa neBasking Sharks kanye nezibankwa eluhlaza. Ngaphandle, izinselo zawo zenza kube lula ukuthi i-Ibex ikhuphuke futhi ibalekele izilwane ezizingelayo eziNtabeni zase-Alps ezinamadwala.
Ngingayibona Kuphi I-Alpine Ibex?
Izintaba zase-Italy kanye Ngaya Okhahlamba LwaseSwitzerland ube nezimbalwa imibono emangalisayo yezilwane zasendle kanye ne-Alpine Ibex ebukele.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukusiza ukuhlela uhambo oluya ezindaweni ezinhle kakhulu zokubuka izilwane zasendle. Uhambo lwesitimela olunqamula iYurophu lulungele ukuya ezindaweni zemvelo zalezi zilwane ezihlukile eYurophu.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izilwane Eziyingqayizivele Eziyi-12 Ukuzibona EYurophu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funique-animals-europe%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#izilwane imvublogglobalworldwide IzilwaneInEurope Iningi LezilwanyaneKwezilwaneEYurophu UniqueAzilwane
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe